Dejero IRONMAN Australia ကိုစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားတယ် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Dejero Challenge အခြေအနေများအတွက်ချိတ်ဆက် IRONMAN သြစတြေးလျသိမ်းထားပြီး
Dejero EnGo မိုဘိုင်း transmitter ကို IRONMAN သြစတြေးလျရဲ့ 2019 ထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်းခက်ခဲမြေပြင်အနေအထား, အဖြစ်အပျက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကွန်ယက်ကိုစိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားကူညီပေးသည်
Waterloo, အွန်, သြဂုတ်လ 13, 2019 - Dejero, Emmy®ဆုရဗွီဒီယိုကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုမိုဃ်းတိမ်ကို-managed ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ်တဲ့မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံသောနေရာများအတွက်မကြာသေးမီက 4- အဘို့, Next ကို Up ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ငါး HEVC နိုင်စွမ်း EnGo မိုဘိုင်းက transmitter နှင့် 8-ရုပ်သံလိုင်းအမှတ်များလက်ခံပေးစဉ် IRONMAN ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုရေးမီဒီယာလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဆိပ်ကမ်း Macquarie အတွက် IRONMAN သြစတြေးလျမှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲ၏ကင်မရာဝေးလံခေါင်သီလွှမ်းခြုံ။
အဆိုပါ 2019 IRONMAN သြစတြေးလျပြိုင်ပွဲတစ် 3.8 ကီလိုမီတာသင်တန်းတစ်ခု 180 ကီလိုမီတာစက်ဘီးသင်တန်းနှင့် 42.2 ကီလိုမီတာပြေးသင်တန်းကူးပါဝင်ပါသည်။ Next ကို Up ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် Facebook ရဲ့အသစ်ကပလက်ဖောင်းက Facebook စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်ပြိုင်ကားအပေါငျးတို့သ 10 နာရီဖုံးအုပ်နှင့်အတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုများ၏အစွန်းရောက်အကွာအဝေးနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုပေးထားသောအဆိုပါသင်္ဘောသားပြိုင်ပွဲမှတစ်ဆင့်အားကစားသမားအောက်ပါစဉ်တုန်းပဲအရည်အသွေးမြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစီး transmit နိုင်မယ့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိုဘိုင်းအသံလွှင့်ဖြေရှင်းချက်လိုအပ်သည်။
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် streaming များအထူးကု, Next ကို Up ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်, အဖြေတစ်ခုနှင့်ထားရှာဖွေမတွေ့ရှိအတူတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည် Dejero'' EnGo မိုဘိုင်း transmitter ကိုထိုကဲ့သို့သောကြီးမားအဖြစ်အပျက်၏အတိုင်းအတာပေးထားယုံကြည်စိတ်ချရသောလိမ့်မည်သည့်လွှမ်းခြုံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသေချာစေရန်တိကျခိုင်မာစွာစမ်းသပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့့်။
"ကျနော်တို့ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ထုတ်လွှင့်ခံရဖို့ခဲ့သောဖြစ်ရပ်၏ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်လွှမ်းခြုံပေး IRONMAN Oceania အားဖြင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ကသိတယ် Dejero task ကိုမှတက်ဖြစ်နှင့်မိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်နည်းပညာ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံများ အသုံးပြု. ဖြစ်ရပ်မှတက်ခဲအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီးရီးထွက်သယ်ဆောင်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခဲ့ Dejero EnGo ဝေးနေဖြင့်ပြိုင်ပွဲရာအရပျကိုယူပြီးခဲ့သည်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းအတည်ငြိမ်ဆုံးနှင့် IRONMAN သြစတြေးလျများအတွက်သာလွန် option ကိုခဲ့ပါတယ်, "အင်ဒရူး Forster, Next ကို Up ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမဟာဗျူဟာကဆိုသည်။ "အမျိုးမျိုးသောလူမှုရေးမီဒီယာလိုင်းများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးရိုက်ကူးပေး၏ဆက်ပြောသည်စိန်ခေါ်မှုကျွန်တော်နှင့်အတူစည်းဝေး၏ယုံကြည်မှုခဲ့ကြသည်တစျခုဖွစျသညျ Dejero ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားမှာ။ "
"ကျနော်တို့အမြဲမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စေခြင်းငှါသွားခဲ့ကြသည်ဟုသိမှတ်လျက်, ငါတို့အဘို့အရေးကြီးဆုံးအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးကူညီနိုင်မယ့်ကွန်ယက်နည်းပညာဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီခဲ့," စတီဖင်ကိန်း, ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ IRONMAN Oceania ကဆိုသည်။ ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ကမိုဘိုင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင်မှီခိုခဲ့ကြသည်အဖြစ် "မတိုင်မီကဖြစ်ရပ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လွှမ်းခြုံကိစ္စများပေါ်လာနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာ သိ. ဒီထုတ်လုပ်မှုသို့သွားလေ၏အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောမိုဘိုင်းလွှမ်းခြုံဇုန်, Repeaters နှင့်အင်တာနာမှတဆင့်ရွေ့လျားအမြဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သွားခဲ့ Dejero ကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူဤကျော်လွှားကူညီပေးခဲ့သည်။ "
"အသုံးပြုခြင်း Dejero ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အင်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ငါပြန်ထိုင်လျက်နှင့်မှော်ဖြစ်ပျက်ကိုစောင့်ကြည့်။ မိုဘိုင်းအသံလွှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်ကြောင့်အလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုအပ်ကြောင်းပိုပိုပြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Dejero - သူတို့ရဲ့သက်သေပြချက်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကြောင့်။ Dejero , တည်ငြိမ်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် IRONMAN သြစတြေးလျစဉ်အတွင်းလှပကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ "စတီဖင်ဆက်ပြောသည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်သုံးစွဲဖို့ရိုးရှင်းတဲ့, EnGo သွက်လက်နှင့်ဘက်စုံလိုအပ်သူကိုမိုဘိုင်းဗီဒီယိုအားအလှူငွေပညာရှင်များအဘို့အဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အဆိုပါ EnGo အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယို encodes နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအလွန်နိမ့်အောင်းနေချိန်-ပင်စိန်ခေါ်မှုကွန်ယက်ကိုအခြေအနေများအတွက်အတူခြွင်းချက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမျိုးစုံအိုင်ပီဆက်သွယ်မှုကျော်ထုတ်လွှင်တစ်ခု HEVC နိုင်စွမ်း, 5G-အဆင်သင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမိုဘိုင်း transmitter ကိုဖြစ်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ 2019 IRONMAN သြစတြေးလျအဖြစ်အပျက်ကနေလွှမ်းခြုံ၏အောင်မြင်သောပေးပို့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကွန်ရက်ကချိတ်ဆက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုဝမ်းသာနေကြတယ်" ဟု Todd Schneider, အကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိချုပ်ကလည်း, Dejero။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်မိုဘိုင်း transmitter ကိုတဖန်အခြေအနေများ၏အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုအတွက်အရည်အသွေးမြင့်လွှမ်းခြုံသေချာစေရန်စျေးကွက်အပေါ်အများဆုံး, ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ခရီးဆောင်ဖြေရှင်းချက်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ "
IRONMAN သြစတြေးလျ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပထမဦးဆုံးသောနေ့၌သန်း 1.5 အထက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်ရောက်ရှိနေပြီနှင့်ကမ္ဘာဖြစ်ရပ်မှနှိုးအဖြစ်ကြီးပွားသတည်း။
ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုဘယ်နေရာမှာမဆို၎င်း၏ရူပါရုံကိုမောင်းနှင်, Dejero cloud computing, အွန်လိုင်းပူးပေါင်းနှင့်ဗီဒီယိုနှင့်အချက်အလက်များ၏လုံခြုံလဲလှယ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အားကိုးဆက်သွယ်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါမျိုးစုံကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရောက်ပြီး။ ယင်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ, Dejero အဆိုပါပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆော့ဖ်ဝဲ, ဆက်သွယ်မှုန်ဆောင်မှုများ, Cloud န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဖြူးခြင်း, ဒီနေ့အဖွဲ့အစည်းများ၏အောင်မြင်မှုကိုမှအရေးပါသည့်င့်နေချိန်နှင့် bandwidth ကိုပေးထောက်ခံပါတယ်။ Waterloo, အွန်, ကနေဒါ, ရုံးချုပ် Dejero ထုတ်လွှင့်အရည်အသွေးကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက high-bandwidth ကိုအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, www သွားရောက်ကြည့်ရှု။dejero.com ။
အင်ဒရူး Forster ၾသစေတးလ် ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ခက်ခဲသော Dejero EnGo Facebook ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ကှေးနိုငျသော သံမဏိလူသား IRONMAN Oceania isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော MKM Marcomms MKM Marketing ကိုဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး မိုဘိုင်းအသံလွှင့် မိုဘိုင်း transmitter Next ကို Up ကိုဒစ်ဂျစ်တယ် စိတ်ချရသော စတီဖင်ကိန်း Todd Schneider 2019-08-13
ယခင်: FilmLight IBC2019 မှာအဆင့်တွင်အရောင်တင်ဆက်
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ "တပ်ဦးနှင့်မြစင်တာ" က Ultra HD မှာပို့ပြီးတိုက်ရိုက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် HDR